Setimadi Dainikतनहुँलाई नेपालमा मात्र नभई विश्व माँझ चिनाउने लक्ष्य छ –मिस तनहुँ श्रेष्ठ - Setimadi Dainik
वन्दिपुर ६ विमलनगर निवासी २० बर्षिय सुजना श्रेष्ठ केही दिन अगाडि दमौलीमा आयोजना गरिएको प्रथम मिस तनहुँ २०१५ प्रतियोगिताको उपाधि हात पार्न सफल भएकी छन् । मिस तनहुँ उपाधि हात पारे सगै जिल्ला व्यापी रुपमा श्रेष्ठको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । उनै श्रेष्ठ संग सेतीमादी दैनिकका सम्वाददाता प्रकाश अधिकारीले गरेको संक्षिप्त कुराकानी ।
सेतीमादीः मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि जित्दा कस्तो अनुभूति भईरहेको छ ?
सुजना ः मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि हात पार्दा म भित्र खुसीको सीमा थिएन । खुसीले मेरा आँखाबाट आँशु बगिरहेको थियो । समग्रमा भन्नुपर्दा मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि हात पार्दा मलाई गौरवको अनुभूति भईरहेको छ ।साथै मिस तनहुँको उपाधि मेरो शिरमा परे सगै ठूलो जिम्मेवारीको बोध गरिरहेको छु ।
सेतीमादी ः जितको श्रेय कस्लाई दिन चाहनु हुन्छ ?
सुजना ः यो जितको श्रेय सम्पूर्ण जिल्लाबासीलाई दिन चाहन्छु । जिल्लाबासीको माया ,ममता , हौसला तथा मेरो परिवारको उचित वातावरणले गर्दा नै मैले मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि हात पार्न सफल भएको हुँ ।
सेतीमादी ः मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि जित्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्थ्यो ?
सुजना ः प्रतिप्रस्र्धामा उत्रिए देखिनै मैले धेरै मिहिनेत गरेको थिए । मिहिनेत गरेपछि फल मिल्छ भन्नेमा विश्वस्त थिए । जब अन्तिम प्रतिस्पर्धाका लागि म स्टेजमा गए निर्धक संग निर्णायकहरुले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिए । त्यसपछि मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि हात पार्नेमा म झन विश्वस्त भए । यसका अलावा मेरो परिवारका सदस्य र साथीभाईको मायाले गर्दा पनि उपाधि जित्नेमा म विश्वस्त थिए ।
सेतीमादीः मिस तनहुँ २०१५ को उपाधि हात पारेपछिको लक्ष्य के छ ?
सुजनाः तनहुँ जिल्ला पर्यटकीय हिसाबले निकै सम्भावना बोकेको जिल्ला हो । उचित प्रचार प्रसार नहुँदा जिल्लामा पर्यटनको विकास हुन सकेको छैन । त्यसैले जिल्लामा पर्यटनको विकासको म आफ्नो तर्फबाट सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नेछु । पर्यटनको क्षेत्रमा तनहुँमा रक क्लाइमिङ, रयाफलिङ,क्यानोनिङ लगायतका खेलहरुको निकै सम्भावना रहेको छ ।ति खेलहरुलाई जिल्लामा भित्रयाउने आफ्नो तर्फबाट पहल गर्नेछु ।
सेतीमादी ः अन्तमा ,के भन्न चाहनुहुन्छ ?
सुजना ः प्रतियोगिता अवधिभर मलाई साथ दिनुभएकोमा सम्पूर्ण जिल्लाबासीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । मेरो जित भनेको तपाईहरुकै जित हो । यो जित सगै भविष्यमा मिस नेपाल प्रतियोगितामा पनि भाग लिनुपर्छ भन्ने सल्लाह र सुझाव आईरहेको छ । मेरो लगनशिलता र हजुरहरुको आर्शिवादले त्यसमा पनि सफलता मिल्नेमा म विश्वस्त छु । अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने तनहुँलाई नेपालमा मात्र नभई विश्व माँझ चिनाउने मेरो लक्ष्य छ ।